> Resource > Talooyin > Sida loo sameeyo a Martiqaad Card shakhsiga Bachelorette xisbiga Si fudud
Habeenkaasu waa habeen aad amiiradaha! Dabaal aad xalay xoriyada la xisbiga Bachelorette iyo in la sameeyo aragti ah oo ku saabsan saaxiibada la shakhsi lagu marti xisbiga Bachelorette! DIY kaar oo macmal ah xisbiga Bachelorette martiqaad fikrad weyn oo lagu samaynta kartoo marti xisbiga Bachelorette noqon doonaa.
Wondershare DVD Muqaal dhise kugu caawin karo samaynta kaararka martiqaad xisbiga Bachelorette shakhsiga. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad DIY badan oo kaararka martiqaad video xisbiga Bachelorette ka foom oo la dhisay-in. Waxa kale oo aad ku dari kartaa sawiro aad jeceshahay iyo waxyaabaha ay u software ka your computer. Sidaas oo kaliya aad u hesho iyo bilowdo dhigay gaar ah lagu marti Roob idinkoo Shifaysan oo aad!
Tallaabo 1: Ku dar aad sawiro arooska iyo videos.
Talaabada 2: shakhsiyeeyo kaarka video Bachelorette. Waxaad ku dari kartaa song jecel sida music asalka, dalban saamaynta qaar ka mid ah si ay sawiro aad, ku dar qoraalka in sawir kasta iyo wixii la mid ah.
Talaabada 3: badbaadi card arooska casuumaad ama gubi in DVD.